Digniinta Tsunami ee silsiladda Jasiiradda Koonfurta Baasifig ka dib dhulgariirkii 7.4
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Digniinta Tsunami ee silsiladda Jasiiradda Koonfurta Baasifig ka dib dhulgariirkii 7.4
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Hanjabaad tsunami ah ayaa laga soo saaray jasiiradaha Kermadec. Jasiiradaha Kermadec, oo ah koox jasiirad fulkaano ku taal Koonfurta Badweynta Baasifigga, 600 mi (1,000 km) waqooyi-bari ee Auckland, New Zealand; waxay ku tiirsan yihiin New Zealand. Waxay ka mid yihiin Raoul (Axad), Macauley, iyo jasiiradaha Curtis iyo l'Esperance Rock waxayna leeyihiin dhul dhan 13 sq mi (34 sq km).
Tani waxay ahayd natiijada a Weynaanta: 7.4 saacadda 12.54 UTC oo leh qoto dheer 6 mayl.
Saacad kahor maanta dhulgariir Magnitude 6.1 ah ayaa kudhagay meel 76 mayl ujirta Nuku'alofa, Tonga Majiro wax warbixino ah oo sheegaya waxyeelo ama dhaawacyo caan ah oo loo yaqaan labada dhulgariir ee waqtigan.
Ma jiraan wax khatar ah oo tsunami ah oo ku wajahan New Zealand ama Hawaii.
eTN way cusbooneysiin doontaa haddii loo baahdo.